Ndithathe unyaka kwiNkomfa, nantsi into eyenzekileyo | Martech Zone
Iinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo zezona zixakeke kakhulu kwimbali yeshishini lethu. Siphinde sayipapasha kwakhona impapasho yethu yeMartech, safudusa iiofisi zethu emva kweminyaka esi-7, saza sazakha ngokunyanisekileyo iinkonzo zethu ukusuka ezantsi. Ndithathe isigqibo sokutsiba iinkomfa apha enyakeni ukuze ndijolise kwishishini. Ngapha koko, khange ndide ndenze uhambo oluya eFlorida ngalo lonke ixesha, apho ndikuthanda khona ukuphumla nokutyelela uMama. (Umama wayengonwabanga yile!)
Phambi kweli xesha, bendithetha phantse kuzo zonke iinkomfa ezinkulu zentengiso eMntla Merika kwaye ndathetha naphesheya kwezilwandle. Ngapha koko, enye yeenkomfa zam endizithandayo zenzeka ngoku- Imithombo yeendaba yeNtlalontle yeHlabathi. Ndiyakuthanda kakhulu ukuthetha kwiinkomfa - kuyandomeleza kwaye ndidibana nabaninzi endinolwalamano lwedijithali kodwa ndingazange ndadibana ngaphambili ngobuqu. Ndingathanda ukwabelana ngendlela echaphazele ngayo mna kunye neshishini lam.
Ukutsiba iiNkomfa zeNtengiso-Okulungileyo
Into enomdla kukuba, kwiminyaka embalwa edlulileyo, ishishini lethu lalinabantu abaninzi abavela ngaphandle kwembindi mpuma. Sasinabathengi kuwo onke amanxweme kunye nezinye iimveliso ezinkulu kakhulu. Ngelixa ibingumsebenzi omkhulu kwaye uhlahlo-lwabiwo mali lwaselunxwemeni luchitha kakuhle kumbindi mpuma, besisokola ukugcina olo lwalamano.
Namhlanje, bonke abaxumi bethu bakwi-midwest kwaye sinobudlelwane obukhulu nabo. Ukuba bazifaka engxakini, nditsibela nje emotweni ndize ndiqhube ndibancede. Ayisiyiyo inketho kunye nabathengi abangaphandle korhulumente. Ke, ukuba ufuna ukwakha ubukho obumangalisayo ekhaya, ukuya kwiinkomfa zentengiso akuyonyani kwaphela.
Njengoko ndibukele inkomfa yam-yokutsiba izihlobo kwi-intanethi, ndinemixholo eyahlukeneyo. Ukubukela iintloko zokuhamba kunye neentsapho ezishiyekileyo akuyonto imnandi. Andiphoswa zizikhululo zeenqwelomoya, ukuhlala ngaphandle kwemithwalo yam, kunye nexesha lokuya emsebenzini nosapho.
Ngaba ndikhumbula nokufunda? Ndiyakunyaniseka ukuba andifundanga nto kuyo nayiphi na inkomfa enkulu endandingayifundanga kwi-Intanethi. Ngapha koko, ngokugxila emsebenzini wabathengi kunye neziphumo zabo, kufanelekile ukuba ndifunde ngakumbi ngokugcina intloko yam kumdlalo apha ekhaya.
Ndifumana ababonisi benkomfa bonwabisa, kodwa ubunzulu kunye neenkcukacha zihlala zisilela ngokwaneleyo ukuba ndibeke ukuqonda kwabo ekusebenzeni ekhaya. Ukuba uthetha kwinkomfa, yeyona njongo yakho… kuba oko kuthetha ukuba enye yeenkampani kubaphulaphuli inokukuqesha ukuba ubonisane nabo.
Ukutsiba iinkomfa - Okubi
Njengoko benditshilo apha ngasentla, isiseko sabathengi-bethu sikhutshiwe kude kwiimveliso ezinkulu kunye nabathengi bakazwelonke. Ndisenza iprojekthi enye ndisebenza nayo Dell, kodwa ayisiyonto iqhelekileyo yokuzibandakanya kwiarhente yethu njengoko ndibamba ngokudibeneyo kuthotho lwepodcast olukhupha kungekudala. Ngapha koko, uhambo lwam olukhulu olulandelayo luya kuba Dell EMC yeHlabathi. Elo thuba lavela ngomlingane owayesebenza kwaye esiya kuDell, nangona kunjalo, andinakulibala kweli nqaku.
Ukungasebenzi ngeempawu ezinkulu kunciphisa iprofayile yakho kancinane kolu shishino. Yinto embi ukuyithetha, kodwa iinkampani eMidwest azisebenzi neearhente ezingasebenziyo ziimpawu ezinkulu. Ngombulelo, sincedise iimveliso ezinkulu ezaneleyo abantu abasithatha nzulu edolophini.
Masijongane nayo, iinkampani eziya kwiinkomfa zine- Uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa. Ngokuzimeleyo, kwakungekho nto ingako yokufumana isikhokelo kwinkomfa… ukuba inkampani yabo ichithe amawaka ambalwa eedola kwitikiti lenkomfa, bayalubona utyalo-mali kwintengiso ibilulutho olukhulu. Ndingahlangabezana namashishini alishumi kwinkomfa kwaye bonke babenohlahlo-lwabiwo mali. Ndingadibana namashishini alishumi ekhaya kwaye elinye lawo linohlahlo-lwabiwo mali. Iinkomfa zinotyalo-mali olukhulu kwisicwangciso sakho sentengiso.
Ngelixa benditshilo ukuba andifundanga nto kwiinkomfa, ixesha lokuya emsebenzini kunye nosapho ukugxila is kuphosiwe. Ndifumene ukuhlwa kwam ehleli ebharini nabanye abathengisi. Sasidla ngokubelana ngempumelelo kunye nokusilela okungenakukhankanywa kwintetho okanye kwintetho, kwaye ukuva ezo nyaniso kwakusomeleza kuba ubusazi ukuba awuwedwa kwimizabalazo yakho kunye nempumelelo.
Iinkomfa zokutsiba -I-Ugly
Ngaba uyalibona igama lam, Douglas Karr, kwabelwana ngazo kuluhlu oluphezulu? Uyandibona kwiipodcast zesizwe? Ngaba uyandibona kwiiwebhubhsayithi zesizwe? Hayi. Ngelixa ndikhulise ukufunda kwethu kwi-Intanethi, qhubeka nokufumana itoni yabaphulaphuli kuthi Udliwanondlebe lokuthengisa, kwaye wasungula ngempumelelo emangalisayo Uluntu lwaseMartech, Ndilahlekelwe yitoni yokubekwa esweni endikhe ndanayo.
Andithandabuzi ukuba ukuya kwiinkomfa, ukuxhasa ezo nkomfa, kunye nokufumana iziselo etywaleni kunye neontanga zam kwandigcina ndibekwe esweni.
Umda wedijithali uyamangalisa, kodwa abantu bangabantu kwaye basadinga ukudibana ukuze benze into engacimekiyo. Ngelixa ndiyintshatsheli kwinja yam uGambino, andidweliswanga kuninzi lwee-100 eziphezulu kwi-Intanethi kunyaka ophelileyo. Xa ndandisiya kwinkomfa, ndandisoloko ndibalwa kuluhlu oluphezulu lwama-25 koontanga bam.
Ke… Ngaba ibalulekile?
Nokuba kubalulekile okanye akunjalo kuxhomekeke kwiinjongo zakho. Ukuba konke malunga nokwamkelwa, ewe. Ukuba konke malunga ne-ego, ewe ngokuqinisekileyo. Ukuba imalunga nokusebenza kunye neempawu ezinkulu zeprofayili, ewe ewe. Ukuba imalunga nokudibana neenkokheli kwishishini lakho, ewe. Ukuba imalunga nokufunda ubugcisa bakho? Meh.
Kum, ngokobuqu, ijaji isaphumile. Ndiyayithanda indawo ebonwa ngamehlo, kodwa andiqinisekanga ngayo ukuba inemali eninzi. Ishishini lam lisempilweni namhlanje kunangaphambili. Kwaye, senza umbono omkhulu ekhaya e-Indianapolis, sakha isitudiyo kwindawo esisebenza nabo apho sifundisa khona amashishini amancinci, sinika amathuba kubafundi edolophini, kwaye sinceda uninzi lwezinto ezingenzi nzuzo edolophini.
tags: Ukuya kwiinkomfayaziwaizintluurhweboIiNkomfa zeNtengisoiinkokeli zentengisomemeukungaziwaUkuthetha esidlangalaleniiindaba zentengiso yeendaba ezentlaloAbathengisi abaphezulu
Mar 22, 2017 ngo-10: 16 AM
Ngaphandle kokufunda ngakumbi kwi-Intanethi kuneenkomfa, ndiyakuthanda kakhulu ukuya kwiinkomfa kunye nokuxhonywa nabantu abathetha ulwimi lokuthengisa ngokwamanani. Andifane ndiye kubo, nangona kunjalo, ngenxa yokuba bexabisa kakhulu.
Mhlawumbi ukuba ndenze iblogi eyaneleyo kumxholo ukuze ndifumane oku kulandelayo, ndiya kuHLAWULWA ukuba ndizimase kwaye ndithethe, kunokuba nditshintshe ikhadi lamatyala ukuze ndibekho.
Mar 22, 2017 ngo-11: 21 AM
Ndikonwabele ukufunda le Doug. Unolwazi olululo lwezinto ozifunayo, kwaye zeziphi iimfuno zeshishini lakho.
Mar 23, 2017 ngo-1: 31 AM
Enkosi Marty! Kuthathwe kuphela iminyaka esi-8?
Mar 26, 2017 ngo 7:46 PM
Enkosi, Doug. Umqhubi wokuba ndiye kwiinkomfa bekuhlala zizithethi ezisemgangathweni. Kwizihlandlo ezininzi endikhetha ukuzihlalela ekhaya, ndigcine amawaka eedola ngokuthenga nje iincwadi zabo-ezo mpapasho zikhusele ukufaneleka kwephaneli. Ewe ngelixa oku kungathathi indawo yamava kunye nothungelwano… kufanelekile ukuba ithathelwe ingqalelo nakubani na. Ngenxa yoko, ndiziva ndifumana ubutyebi obunobutyebi kunye nobunzulu endinokubandwendwela ndiphindaphinda.